မန္တလေးတွင် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ယာဉ်စစ်ရက်ချိန်းရယူခြင်းကို အွန်လိုင်းစနစ် ပြောင်းလဲကျင့်သုံးမည် | ❃ Tachileik News Agency ❃ www.tachileik.net
မန္တလေးတွင် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ယာဉ်စစ်ရက်ချိန်းရယူခြင်းကို အွန်လိုင်းစနစ် ပြောင်းလဲကျင့်သုံးမည်
Writen by Tachileik News Agency 12:18:00 PM -0Comments
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် နှစ်လဲမှတ်ပုံတင် သက်တမ်းတိုးယာဉ် ယာဉ်စစ်ရက်ချိန်းရယူခြင်းနှင့် မော်တော်ယာဉ် မှန်ကန်မှု ရှိ၊ မရှိ ယာဉ်စစ်ရက်ချိန်းရယူခြင်းတို့အား အွန်လိုင်းမှကြိုတင်စာရင်းသွင်းသည့်စနစ် (Online Booking System) ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ (၁) ရက်နေ့မှ စတင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပြီး ရက်ချိန်းရယူလိုသည့် ယာဉ်ပိုင်ရှင်များသည် စက်တင်ဘာ (၂၈) မှစတင်၍ ယာဉ်စစ်ရက်ချိန်းကို စတင်ရယူနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယာဉ်စစ်ရက်ချိန်းကို www. rtad.gov.mm Website တွင် Online Booking စနစ်ဖြင့် အနည်းဆုံး (၃)ရက်မှ အများဆုံး ရက်(၃၀) ကြိုတင်ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ခရိုင်ရုံး (မန္တလေးမြောက်ပိုင်း)နှင့် (မန္တလေးတောင်ပိုင်း) တို့တွင် နေ့စဉ် နှစ်လဲမှတ်ပုံတင် သက်တမ်းတိုး ယာဉ်စီးရေနှင့် မော်တော်ယာဉ် မှန်ကန်မှု ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးသည့် ယာဉ်စီးရေ များပြားနေသဖြင့် ယင်းကဲ့သို့ပြောင်းလဲကျင့်သုံးလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Online Booking ရယူရန် အခက်အခဲရှိသူများအတွက် နှစ်လဲသက်တမ်းတိုးခြင်းကို လတစ်လ၏ နောက်ဆုံး ရုံးဖွင့်ရက်(၂) ရက်တွင် Online Booking ရက်ချိန်းရယူရန် မလိုဘဲ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ Online Booking စနစ်ကို နှစ်လဲမှတ်ပုံတင် သက်တမ်းတိုး မော်တော်ယာဉ်များအတွက်သာ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး နယ်ဝင်ယာဉ်များ၊ ပြောင်းလဲခြင်း စစ်ဆေးခံမည့် ယာဉ်များ၊ မော်တော် ဆိုင်ကယ်များ၊ သုံးဘီးယာဉ်များ၊ ထော်လာဂျီယာဉ်များနှင့် နှစ်တန်နှင့်အထက် မော်တော်ယာဉ်များသည် ယခင်အတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နှစ်လဲမှတ်ပုံတင် သက်တမ်းတိုးခြင်းကို ရုံးဖွင့်ရက်များတွင် နံနက် (၉) နာရီမှ နေ့လယ်( ၁၂) နာရီအထိနှင့် နေ့လယ်(၁) နာရီမှ ညနေ (၃) နာရီခွဲအထိ နှစ်ချိန်ခွဲ၍ ခရိုင်ရုံး(မန္တလေးတောင်ပိုင်း) ၌ နံနက်ပိုင်း အစီး (၁၅ဝ)၊ မွန်းလွဲပိုင်း (၁၂၅) စီးနှင့် ခရိုင်ရုံး (မန္တလေးမြောက်ပိုင်း) ၌ နံနက်ပိုင်း အစီး (၂ဝဝ)၊ မွန်းလွဲပိုင်း (၁၇၅) စီး လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မော်တော်ယာဉ်မှန်ကန်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ ယာဉ် စစ်ဆေး ခြင်းကို ရုံးဖွင့်ရက်များအတွင်း နေ့လယ်(၁)နာရီနောက်ပိုင်း၊ လစဉ် လဆန်း (၁) ရက်မှ (၂၅) ရက်အတွင်း နေ့စဉ် မော်တော်ယာဉ်စီးရေ (၅ဝ) လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Online Booking စနစ် အသုံးပြုရန် အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား www.motc.gov.mm ၊ www.myanmarrtad.com ၊ www.rtad.gov.mm နှင့် Road Transport Facebook Page တို့တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ရုံးချုပ်(နေပြည်တော်) ဖုန်း-ဝ၆၇-၃၄ဝ၅ဝ၉၉၊ တိုင်းဒေသကြီးရုံး (မန္တလေး) ဖုန်း-ဝ၂-၄ဝ၃၆၁၁၃၊ ခရိုင်ရုံး (မန္တလေး တောင်ပိုင်း) ဖုန်း-ဝ၂-၄ဝ၃၆၆၉၇၊ ခရိုင်ရုံး (မန္တလေး မြောက်ပိုင်း) ဖုန်း-ဝ၂-၄ဝ၆၁၈၃၆ တို့သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
မန်တလေးတှငျ ကုနျးလမျးပို့ဆောငျရေးညှနျကွားမှုဦးစီးဌာနမှ ယာဉျစဈရကျခြိနျးရယူခွငျးကို အှနျလိုငျးစနဈ ပွောငျးလဲကငျြ့သုံးမညျ
မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီးတှငျ နှဈလဲမှတျပုံတငျ သကျတမျးတိုးယာဉျ ယာဉျစဈရကျခြိနျးရယူခွငျးနှငျ့ မျောတျောယာဉျ မှနျကနျမှု ရှိ၊ မရှိ ယာဉျစဈရကျခြိနျးရယူခွငျးတို့အား အှနျလိုငျးမှကွိုတငျစာရငျးသှငျးသညျ့စနဈ (Online Booking System) ကို ၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ အောကျတိုဘာ (၁) ရကျနမှေ့ စတငျဆောငျရှကျပေးသှားမညျ ဖွဈပွီး ရကျခြိနျးရယူလိုသညျ့ ယာဉျပိုငျရှငျမြားသညျ စကျတငျဘာ (၂၈) မှစတငျ၍ ယာဉျစဈရကျခြိနျးကို စတငျရယူနိုငျပွီဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
ယာဉျစဈရကျခြိနျးကို www. rtad.gov.mm Website တှငျ Online Booking စနဈဖွငျ့ အနညျးဆုံး (၃)ရကျမှ အမြားဆုံး ရကျ(၃၀) ကွိုတငျရယူနိုငျမညျဖွဈကွောငျးသိရသညျ။
ကုနျးလမျးပို့ဆောငျရေးညှနျကွားမှုဦးစီးဌာန၊ မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီးအတှငျးရှိ ခရိုငျရုံး (မန်တလေးမွောကျပိုငျး)နှငျ့ (မန်တလေးတောငျပိုငျး) တို့တှငျ နစေ့ဉျ နှဈလဲမှတျပုံတငျ သကျတမျးတိုး ယာဉျစီးရနှေငျ့ မျောတျောယာဉျ မှနျကနျမှု ရှိ၊ မရှိ စဈဆေးသညျ့ ယာဉျစီးရေ မြားပွားနသေဖွငျ့ ယငျးကဲ့သို့ပွောငျးလဲကငျြ့သုံးလိုကျခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
Online Booking ရယူရနျ အခကျအခဲရှိသူမြားအတှကျ နှဈလဲသကျတမျးတိုးခွငျးကို လတဈလ၏ နောကျဆုံး ရုံးဖှငျ့ရကျ(၂) ရကျတှငျ Online Booking ရကျခြိနျးရယူရနျ မလိုဘဲ ဆောငျရှကျပေးသှားမညျ ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
အဆိုပါ Online Booking စနဈကို နှဈလဲမှတျပုံတငျ သကျတမျးတိုး မျောတျောယာဉျမြားအတှကျသာ ဆောငျရှကျပေးသှားမညျဖွဈပွီး နယျဝငျယာဉျမြား၊ ပွောငျးလဲခွငျး စဈဆေးခံမညျ့ ယာဉျမြား၊ မျောတျော ဆိုငျကယျမြား၊ သုံးဘီးယာဉျမြား၊ ထျောလာဂြီယာဉျမြားနှငျ့ နှဈတနျနှငျ့အထကျ မျောတျောယာဉျမြားသညျ ယခငျအတိုငျးဆောငျရှကျပေးမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
နှဈလဲမှတျပုံတငျ သကျတမျးတိုးခွငျးကို ရုံးဖှငျ့ရကျမြားတှငျ နံနကျ (၉) နာရီမှ နလေ့ယျ( ၁၂) နာရီအထိနှငျ့ နလေ့ယျ(၁) နာရီမှ ညနေ (၃) နာရီခှဲအထိ နှဈခြိနျခှဲ၍ ခရိုငျရုံး(မန်တလေးတောငျပိုငျး) ၌ နံနကျပိုငျး အစီး (၁၅ဝ)၊ မှနျးလှဲပိုငျး (၁၂၅) စီးနှငျ့ ခရိုငျရုံး (မန်တလေးမွောကျပိုငျး) ၌ နံနကျပိုငျး အစီး (၂ဝဝ)၊ မှနျးလှဲပိုငျး (၁၇၅) စီး လကျခံဆောငျရှကျပေးသှားမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
မျောတျောယာဉျမှနျကနျခွငျး ရှိ၊ မရှိ ယာဉျ စဈဆေး ခွငျးကို ရုံးဖှငျ့ရကျမြားအတှငျး နလေ့ယျ(၁)နာရီနောကျပိုငျး၊ လစဉျ လဆနျး (၁) ရကျမှ (၂၅) ရကျအတှငျး နစေ့ဉျ မျောတျောယာဉျစီးရေ (၅ဝ) လကျခံဆောငျရှကျပေးမညျ ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
Online Booking စနဈ အသုံးပွုရနျ အသေးစိတျအခကျြအလကျမြားအား www.motc.gov.mm ၊ www.myanmarrtad.com ၊ www.rtad.gov.mm နှငျ့ Road Transport Facebook Page တို့တှငျ ကွညျ့ရှုနိုငျပွီး ရုံးခြုပျ(နပွေညျတျော) ဖုနျး-ဝ၆၇-၃၄ဝ၅ဝ၉၉၊ တိုငျးဒသေကွီးရုံး (မန်တလေး) ဖုနျး-ဝ၂-၄ဝ၃၆၁၁၃၊ ခရိုငျရုံး (မန်တလေး တောငျပိုငျး) ဖုနျး-ဝ၂-၄ဝ၃၆၆၉၇၊ ခရိုငျရုံး (မန်တလေး မွောကျပိုငျး) ဖုနျး-ဝ၂-၄ဝ၆၁၈၃၆ တို့သို့ ရုံးခြိနျအတှငျး ဆကျသှယျ စုံစမျးမေးမွနျးနိုငျကွောငျး ကုနျးလမျးပို့ဆောငျရေးညှနျကွားမှု ဦးစီးဌာနမှ သိရသညျ။